Faahfaahin: Baardheere oo Maanta La Duqeeyay | RBC Radio	Home
Wednesday, September 26th, 2012 at 12:32 am	/ 4 Comments Saturday, September 29th, 2012 at 10:18 pm Faahfaahin: Baardheere oo Maanta La Duqeeyay
Baardheere (RBC) Wararka ka imaanaya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ugu yaraan hal ruux uu ku dhintay duqeyn maanta ka dhacday magaaladaasi.
Duqeynta ayaa waxaa sida dad ku sugan magaalada ay sheegayaan geystay diyaarad militari oo loo maleynayo in laga leeyahay Kenya taasoo dhowr gantaal la beegsaday gudaha iyo bannaanka magaalada.
Hal qof ayaa la soo sheegay inuu ku dhintay markii gantaal ka mid ahaa kuwii ay ridaysay diyaarada uu ku dhacay meel u dhow masjid ku yaalla gudaha magaalada, ugu yaraan labo kale ayaa ku dhaawacantay halkaasi.
Xaalada magaalada Baardheere ayaa galabta aad u kacsaneyd waxaana dadka ay ka welwelsanaayeen duqeymaha ka dhacaya magaalada.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaar ka mid ah qoysaskii ku noolaa magaalada ay bilaabeen inay maanta ka qaxaan magaalada kadib markii duqeynta ay dhacday.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Kenya iyo kuwa Dawlada Soomaaliya ay ku wajahan yihiin magaaladaasi kadib magaalada Kismaayo oo ahayd xaruntii ugu weyneyd ururka Al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya taasoo xalay ay ka bexeen kadib markii ay ku soo dhowaadeen ciidamada Kenya iyo kuwa dawlada.
1 Response for “Faahfaahin: Baardheere oo Maanta La Duqeeyay”
Birqalax says:	October 1, 2012 at 12:11 am	Meel kasta Waa Qub iyo qac iyo qax.